Hoy > UNSOS OO TAAGEERTAY DADAALLO LAGU SOO CELINAYO DHOOLACADAYNTA WAJIYADA SOOMAALIDA QABA CILLADAHA FARUUR DILAACA
Baydhabo– Koox caafimaad oo ka kooban shaqaale ka tirsan Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), hay'adda samafalka dillaaca bishimaha ee 'Smile Train', iyo xarunta Horumarinta Adduunka ee Bancroft, ayaa fuliyay qaliinno dibnaha iyo afka oo bilaash ah muddo toddobaad ah, Isbitaalka Gobolka Bay ee magaalada Baydhabo, xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Afartan iyo toddoba bukaan ayaa daaweyn qalliin ah helay dhammaadkii xerada qalliinka Jimcihii la soo dhaafay, oo ka dhan ah bartilmaameedkii hore ee afartan. Sababtoo ah dad aad u tiro badan, maamulka Isbitaalka Gobolka Bay ayaa sheegaya in boqolaal bukaan oo baahan la geliyay liiska sugitaanka, illaa laga sameeyo xero qalliin oo la mid ah, mustaqbalka dhow.
“Waxaan ka ciyaareynaa door fududeyn ah abaabulka dadweynaha si ay u yimaadaan qalliinka,” ayuu yiri Cabdifataax Ibraahim Xaashi, Agaasimaha Isbitaalka Gobolka Baay. Waxa uu sheegay in dhowr bukaan ay ka soo safreen ilaa gobollada Baay iyo Bakool si loogu sameeyo qalliin.
Xafiiska Taageerada Qaramada Midoobey ee Soomaaliya (UNSOS), ayaa taageerad saadka u fidiyay hindisahan, oo ay ka mid yihiin gaadiidka hawada ee bilaashka ah iyo hoyga kooxda ‘Smile Train’, oo ka kooban dhakhaatiir caafimaad iyo kalkaaliyaal caafimaad. Dhakhaatiir ka socota UNSOS ayaa sidoo kale caawiyay kooxaha qalliinka ee goobta.
Naafanimo guud oo ka dhex jirta dadka Soomaaliyeed, kumanaan kun oo ku nool dalka geeska Afrika ayaa la nool dibnaha iyo dillaacyada sanqadha muddo tobanaan sano ah, taas oo ay ugu wacan tahay awood aan ku filnayn isbitaallada maxalliga ah si ay u fuliyaan hababka sixitaanka.
Si ballaaran loogu yeero “faruur” oo ah lahjadda Soomaaliga, dibinta dillaacda iyo dhabanku waa xaalad dhacda marka dibinta ama afku aysan si buuxda u samaysmin, xilliga uurjiifku ku korayo ilma -galeenka hooyada. Haddii aan la daaweyn, xaaladdu waxay keentaa naafo wejiga waxayna keentaa cilado xagga quudinta ah iyo dhibaatooyin caafimaad oo kale, sida uu sheegayo dhakhtarka qalliinka hoggaaminaya, dhakhtarka ciidamada Uganda Col. Dr. James Kiyengo.
“Faruuryaha dillaacay ayaa ku badan Soomaaliya waxaanan isku dayi doonnaa inaan qaliinno ugu yaraan 50 bukaan ah dhammaadka toddobaadkan,” Dr. Kiyengo ayaa saadaaliyay, bilowgii xerada qalliinka, oo dhacday 17 - 23 Maarso, 2018.
Dr. Kiyengo wuxuu walaac ka muujiyey in bukaannada qaba qallooca liinta ee Soomaaliya ay la kulmaan dayacaad bulsho, taas oo ay ugu wacan tahay dhaleeceynta la xiriirta xaaladda.
“Bukaanka faruuryaha dillaacsan waxay dhibaato kala kulmaan asaaggood. Carruurta ayaa mararka qaarkood waxaa ku kaftamaya kuwa kale, sidaas darteedna ma aadi karaan dugsiga; si fiican uma hadli karaan; ma qori karaan xarfaha sida xarafka ‘P.’ Markay hadlayaan, dhabanku wuxuu ka joojiyaa inay si wada jir ah u hadlaan, ”ayuu sharraxay.
Ka-faa'iidaystayaasha xerada qalliinka oo lacag la'aan ah ayaa sheegaya in noloshooda loo beddelay si wanaagsan. Qof qaraabo la ah mid ka mid ah ka-faa'iideystayaasha ayaa ku tilmaamay qalliinka sixitaanka ee walaalkiis ka yar inuu yahay mid nolosha beddelaya.
“Waxaan ka imaanay xaafadda Mooda Mooda. Maadaama wejigiisu yahay qaybta ugu muhiimsan ee jirka, qaar ka mid ah wejiyadiisii ayaa dib loo soo celiyey oo hadda si xor ah ayuu ula macaamili karaa dadka kale ee bulshada, ”ayaa lagu magacaabey Madeey Kusow, qalliinkii lagu guuleystay ka dib.
“Waxaan u mahadcelinayaa dhakhaatiirta iyo kuwa kale ee qalliinkan lacag la’aanta ah keenay albaabkeenna, maadaama aanan awoodin inaan raadino qalliinkan sixitaanka ah ee dalka dibaddiisa ah,” ayuu raaciyay.
In kasta oo qalloocnaanta farta iyo cilladaha qallooca lagu saxi karo qalliin, kumanaan qof oo Soomaali ah oo qaba xaaladdan ayaan awoodin inay helaan daaweyn ama hababka wax toosinta, taas oo ay ugu wacan tahay iyadoo aan laga helin adeegyadan waddanka Geeska Afrika ku yaal, oo nidaamyadii caafimaadkoodu burbureen intii uu socday dagaalkii sokeeye 1990kii.
Qiimaha qaaliga ah ee qalliin khaas ah, ayaa sidoo kale la micno ah in qalliinnada noocaas ah ee wax lagu saxo ay yihiin kuwo aan gaari karin Soomaalida caadiga ah. Kooxda caafimaadku waxay isku raaceen in xerooyin caafimaad oo la mid ah la qabto si loo siiyo qalliinnada nolosha beddelaya dadka baahan.
Xarunta Horumarinta Adduunka ee Bancroft ayaa qalab u siisay xerada qalliinka iyo dhakhaatiir Soomaali iyo AMISOM oo tababaran; iyo shaqaalaha gurmadka deg -degga ah ee Isbitaalka Gobolka Bay, oo ku saabsan sidii ay u fulin lahaayeen qalliinnadaas oo kale kaligood.
Tani waa markii ugu horraysay oo xero noocan oo kale ah lagu qabto meel ka baxsan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Intii u dhexeysay 2016 iyo 2017, xero qalliin oo tan la mid ah ayaa ku guulaysatay in ka badan 700 oo bukaan ah oo lagu qalay Isbitaalka II ee AMISOM ee Muqdisho.
  UNSOS OO QABATAY AQOON-ISWAYDARSI LAGU KORDHINAYO XOOGGAGA SOMALIYA IYO TIJNOLOJIYADA 
  WAFDI KA SOCDA QAYBTA TAAGEERADA HAWLGALLADA NABAD EE MIDOWGA AFRIKA OO BOOQDAY SOOMAALIYA 
Source URL: https://unsos.unmissions.org/so/unsos-oo-taageertay-dadaallo-lagu-soo-celinayo-dhoolacadaynta-wajiyada-soomaalida-qaba-cilladaha